Naseho ny : 11 febroary 2020
11 febroary — Natokan'ny Fiangonana hankalazana an'i Masina Maria niseho tany Lourdes ny 11 febroary. I Masina Maria izay nambara fa nanalefaka ny fijalian'ny olona maro teo amin'io toerana io ary nampihavana fanahy maro tamin'Andriamanitra.
Tao Lourdes no nisehoan'i Masina Maria ho mpitondra tenin'ny sitrapon'Ilay Zanak'Andriamanitra. Betsaka ny traik'efa hita ao Lourdes: ao ny olona no mianatra mijaly toa an'i Kristy ary manaiky ny fangirifiriana toy ny naneken'i Kristy ny fampijaliana azy. Fa ao amin'io toerana io ihany koa no ianarana fa manamaivana ny fijaliana ny finoana. Fijaliana izay manjary fanehoana fitiavana.
Ny 11 febroary 1984 ny papa Joany Paoly II no nanolotra ilay taratasy apôstôlika manazava ny hevitra na ny lanjan'ny fijaliana eo amin'ny fiainana kristianina. Taratasy apôstôlika nampitondrainy ny lohateny hoe "Salvici doloris". Herintaona taorian'io izy no nanangana ny Filankevitra Pôntifikaly ho an'ny pastôralin'ny fahasalamana ary nambarany fa andro eran-tany ho an'ny marary sy ireo mpitsabo ary ireo mpikarakara azy ny 11 febroary. Tamin'ny 13 mey 1992 no nanambarany izany ampahibemaso.
Dia izay ihany koa no mbola tohizin'ny Fiangonana amin'izao fotoana izao, hahatsiarovana ireo rehetra miaina izany fangirifiriana izany, ireo rehetra mikarakara azy, ireo mpitsabo azy amin'ity 11 febroary ity.